Anjanahary sy ny manodidina… : voasambotry ireo andiana mpanendaka eny amin’ny «cimetière» | NewsMada
Anjanahary sy ny manodidina… : voasambotry ireo andiana mpanendaka eny amin’ny «cimetière»
Saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahatelo eo Antaninandro teo am-panaovana ny asa ratsiny eo amin’ny fasana eny Anjanahary, ny talata teo ny jiolahy telo mpanendaka eny an-toerana. Vao nivoaka ny fonja iray volana lasa izay ny iray amin’izy ireo…
Noraisim-potsiny ! Maro ny olona efa nitondra faisana tamin’ireo jiolahy mpanendaka eny amin’ny fasana eny Anjanahary ireto. Araka ny fanazavan’ny polisy, renim-pianakaviana iray no lasibatry ny fanendahana nataon’ireto jiolahy ireto, ny talata maraina. Nahatsikaritra ny fihetsik’ireto jiolahy ireto ny fiara iray sendra nandalo ka nampaneno anjomara avy hatrany ny mpamily ka lasa nitsoaka ry zalahy. Niverina niandry teo amin’ny fasana eny Anjanahary indray anefa ry zalahy ny alin’io fotoana io ihany. Lehilahy iray no nendahin’izy ireo. Vokany, lasan’izy ireo ny vola 80 000 Ar, finday sy firavaka volamena. Voalazan’ny polisy fa ny roa lahy mibeda ary ny iray kosa mody milaza fa manana basy sy manao izay tsy hampihetsika ilay olona lasibatra.
Niroso tamin’ny fanadihadiana avy hatrany ny polisy taorian’ny fisamborana azy ireo. Fantatra tamin’izany fa jiolahy vao nivoaka ny fonja iray volana ny iray amin’ireto jiolahy ireto, saingy izao miverina manohy ny asa ratsiny izao. Maro rahateo ireo olona velon-taraina sy nitondra takaitra noho ny afitsok’ireto jiolahy ireto. Isan’ny toerana fieren’ny jiolahy ny fasana eny Anjanahary. Misento kely indray araka izany, ny mponina eny Anjanahary amin’izao nahasamborana ireto jiolahy ireto izao.